ah ee Aduunka
Lacag ayaanu Dhigaynaa.
Lacag ayaanu Dhigaynaa. Waad Faa'idaysaa!
Waad ku mahadsan tahay isdiiwaangalinta Tartanka Ganacsiga Caalamiga ah ee Live Live
dhigaal ugu yaraan $ 200 si aad ugu qalanto oo aad ugu wargaliso Maareeyaha Koontadaada si aad u xaqiijiso booskaaga!
Xaqiijinta emaylka oo leh faahfaahinta galitaankaaga ayaa la soo diri doonaa ka hor inta aysan munaasabadu bilaaban
mahadsan tahay taageerada baaxadda leh
Waad ku mahadsan
tahay taageerada baaxadda leh
Ku dadaal kaadhkaaga hada oo nagusoo biir Tartanka Ganacsiga Tooska ah ee Aduunka! Shuruucdu way fududahay; Dhigo $ 200 waxaanan ku siin doonnaa koonto tartan oo lacag la'aan ah oo lagu maalgeliyay $ 500 si aad uga ganacsato oo aad u hesho faa'iidooyinkaaga oo dhan!
Ha moogaan fursadan cajiibka ah si aad uga baratid una sameysid waxbadan oo xirfadahaaga ganacsiga ah 2 saac oo ganacsi bilaa khatar ah, madaama ay khubaradayadu ku siinayaan talooyin iyo siyaasado tababarkooda ayagoo kugu siinaya luqadaada hooyo!
Sharciyada Iyo Shuruudaha
$ 9000 + lacag bixinta laga bilaabo 2-dii saac ee ugu dambeysay Ganacsigii Caalamka ee ugu dambeeyay
MAXAAD KU QAYBGALAYSAA
Buuxi foomka oo dhigo $ 200 oo
keliya si aad uga qaybqaadato
Akoon Tartan oo Bilaasha lehna $500
Akoon Dhaba oo leh 0 Khatar ah
11.00 Hordhaca FXPRIMUS Tartanka oo Kooban
12.00 Tartanka Ganacsiga Tooska ah
14.00 Siyaasad Falanqayn Guul leh, Q&A
WAA KUWAAN GUULEYSTAYAASHEENA!
Waad tustay Waad baratay. Waad baayacmushtartay. Waad ku guuleysatay, ha ahaato abaalmarino ama khibrad aad u badan si aad u awooddo ganacsigaaga.
Waxaan rajaynaynaa inaad ka heshay dhacdadan intii aan kuu qabanqaabinay.
Hambalyo aad u weyn ayaan u haynaa dhammaan guuleystayaashayagii u qalmay waxaanan rajaynaynaa inaan mar kale kugu marti qaadno!
Si naxariis leh guji sumadda si aad u hubiso kuwa ku guuleystay
La bilaw ganacsi maanta FXPRIMUS!
Websaytkan waxaa maamula shirkadda Primus Markets INTL Limited, oo xubin ka ah Shirkadda FXPRIMUS koox ahaan.
FXPRIMUS waa magaca sumadda ee loo isticmaalo:
Primus Global Ltd, waxa maamula CySEC oo haysata liisanka no. 261/14.
Suuqyada Primus INTL Limited, oo ay maamusho VFSC, oo leh lambarka diiwaangelinta 14595.
Digniinta halista ah: Fadlan ogsoonow in ka ganacsiga Forex ama isku badalka lacagaha qalaad iyo ka ganacsiga khidmadaha alaabooyinka ay ku jiraan halis weyn oo aan ku habooneyn maalgashadayaasha dhammaantood Ka ganacsiga aaladaha maaliyadeed waxay ku dambayn kartaa khasaarooyin sidoo kale faa iido iyo khasaarahaagu wuu ka balaadhan karaa lacagtii aad ku maalgashatay bilawgii. ka hor inta aadan fulin dhaqdhaqaaqyadan waa in aad hubisaa in aad si dhamaystiran u fahamtay khataraha la socda oo aad raadiso talo madaxbanaan hadii loo baahdo.
Macluumaadkaan looma leexin karo ama looguma talo galin in lagu qaybiyo ama ay isticmaalaan dadka deganeyaasha qaar kamid ah waddammada/xukun maxkamadeed ay ku jiraan, laakin aan ku koobnayn, Australia, Belgium, France, Iran, Japan, North Korea and USA. Shirkaddu uma fidiso adeegyadeeda deganeyaasha waddammo / xukun maxkamadeed gaar ah oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xadidnayn, Australia, Belgium, France, Iran, Japan, North Korea iyo USA.
© 2021 FXPRIMUS. Dhamaan Xuquuqdu way dhawrsan tahay.
Tartanka Caalamiga ee Tooska Ah 30 September 2021
Tirada kaqeybqaatayaasha ugu badan waxay noqon doonaan 500 qof
Si aad ugu haboonaatid inaad ka qeybgashid, qof kastaba waa inuu lahaadaa akoon toosa, oo la ansixiyey shaqeynaya oo FXPRIMUS ka tirsaan buuxiyeyna shuruudahan hoose:
1. Dhigashada ugu yar ee USD 200 oo la sameeyey 3 toddobaad ka hor taariikhda tartanka
2. Ka qeyb qaate kastaba wuxuu heli doonaa lacag dhan $500 USD hal wakhti ah oo lagu “tartamo”
3. Tartanka wuxuu dhici doonaa 30ka September 2021
4. Tartanka ganacsiga wuxuu bilaaban doonaa 12.00 GMT wuxuuna dhamaan doonaa 14.00 GMT. Warbixin kooban ayaa la samayn doonaa ka hor inta uusan tartanku bilaaban.
5. Ka qeyb galuhu waaa inuu ku ganacsadaa ugu yaraan 3 lots
6. Xajmiga ugu weyn waa 1 lot tigidhkiiba
7. Tirada ganacsiyada ugu badan ee la wada furi karo waa 5 ganacsi
8. Ka -qaybgale kasta waa inuu furaa/xidhaa ugu yaraan 15 jago. Ka -qaybgale kasta waa inuu ka ganacsadaa ugu yaraan kuwa soo socda:
4 ugu yaraan lammaane lacageed oo kala duwan
1 Dahab ama Qalin
9. Taageerida ka qeyb qaate kale waxay ka saaraysaa labada ka qeyb qaataba
10. Ka qeyb qaatayaasha leh ciwaan IP isku mid ama isku Qoys ah waa laga saarayaa
11. Ganacsiyada furnaa inka badan 30 daqiiqo waa la saarayaa. Ganacsiyada lagu daayey furnaan in ka yar 1 daqiiqo waa laga saarayaa. Guulaha laga helay ganacsiyada la sheegay waa laga saarayaa.
12. Dhamaadka tartanka, ka qeyb qaate kasta oo leh hadhaa wanaagsan wuu guulaysanayaa
13. Guusha ugu badan ee ka qeyb qaatuhu kala bixi karo waa USD 1,000 (Ka baxsan #14)
14. Wadarta ugu badan ee FXPRIMUS bixin doonto waa USD 10,000
15 Lacala hadii inta ugu badan 14 la gaadho, guulaha waxaa loogu qeybin doonaa si isleeg dhibcaha 14
16. 14 maalmood oo shaqo gudahood, guulaha waxaa lagu wareejin doonaa koontada ganacsiga tooska ah ee ka - qaybgalaha, halkaas oo ka -qaybgalaha uu ku ganacsan karo ama uu la bixi karo guulahiisa; iyagoo u malaynaya i nay buuxiyeen shuruudihii oo dhan
17. FXPRIMUS waxay xaq u leedahay badelista ama badelida awooda sare Ts’ iyo Cs’
18. FXPRIMUS waxay xaq u leedahay inay joojiso ama badesho taariikhda(ha) dhameystirka qeyb ahaan ama gabi ahaanba fasaxeeda
19. Lacala kala duwanaanshaha u dhaxeeya Ingiriisiga iyo "Heshiisyada & Shuruudaha" la turjumay, qeybta Ingiriisiga ayaa loo tixgalin doonaa sax.